Sida loo kiciyo qaabka mugdiga ah ee Signal | Androidsis
Habka mugdiga ah ayaa culeys ka helayay codsiyo badan iyo midkood oo aan rabin in laga tago waa Signal, mid ka mid ah barnaamijyada fariimaha deg dega ah ee soo kordhaya. Iyadoo ilaa 50 milyan oo adeegsadayaal, Aaladda caanka ah waxaa ka mid ahaa bilo ka hor boodboodkii weynaa ka dib.
Si aad udhaqaajiso qaabka mugdiga ah ee Signal waa wax fudud, si aad u badan sidaa darteed waa inaan qaadnaa dhowr tallaabo si aan u helno oo aan ugu raaxeysto doorashadan. Habka caanka ah ee "Dark Mode" ayaa had iyo jeer noqon doona mid dhameystiran oo ku shaqeynaya qalabkeena, xitaa haddii aadan haysan qaabka taleefankaaga uu ku shaqeynayo.
Signal ayaa fulinaysay astaamo badan oo cusub bilihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan tusaale ahaan kan awood u siiya wada sheekaysiga baaba'aya waqti go'an. Waxaad awoodi doontaa inaad ka tirtirto farriimahaas wada hadalada waqti qiyaaseed adigoon ku sameynin qaab gacanta ah oo culeys badan ku noqon kara.
Iyadoo la adeegsanayo Moodh, barnaamijka Signal wuxuu leeyahay mid ka mid ah waxyaabihii ay bulshada weydiisteen kadib markay uyimid codsiyo badan oo looyaqaano tartan. WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhaqaajiso qaabka mugdiga ah, sidoo kale waad awoodaa dhaqaajiso Xaaladda Madoow ee Telegram oo badbaadi batteriga oo daal indhahayaga yareeya.
Si aad ugudhaqaajiso habka mugdiga ah Signal waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka Signal qalabkaaga Android, ha noqoto taleefankaaga ama kiniinigaaga
Markaad furto, tag Settings
Hada Settings waxaad aadaa "Muuqaalka", ka dibna tag Mawduuca oo dooro "Moodow Madoow"
Marka qaabkan la doorto, dalabku wuxuu lahaan doonaa habka firfircoon ee caadiga ah illaa intaad u baahatid, waxa kaliya ee hoos u dhacayaa waa inaanan dhaqaajin karin inta lagu jiro saacadaha qaarkood. Telegram tusaale ahaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku dhejiso saacad gudaheed ka dibna ay timaado in si toos ah looga saaro.
Saxiix sida ay u socoto wuu sii kori doonaa, oo dhan ka dib markii la ogaaday in boqolkiiba kor u kaca ay tahay 4.300% tan iyo markii WhatsApp ay ku dhawaaqday inay beddeli doonto siyaasadda asturnaanta. WhatsApp waxay xaqiijineysaa inay noqoneyso 15-ka Maajo ee aysan aheyn 8-da Febraayo marka ay sidaan si rasmi ah u dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo habka mugdiga ah ee Signal
WhatsApp waxay siinaysaa waqti badan dadka isticmaala si ay u aqbalaan shuruudaha: Ilaa 15-ka Maajo